[Sanaag Dhawaaqa Dhalinyarada hala tix-geliyo
Saturday September 15, 2018 - 00:42:42 in Wararka by Super Admin
Guud ahaan Doorashaa loo dareerayaa PL waxana socota qaban-qaabada xulida Baarlamaanka cusub ee 2019- Gobolada aadka farta loogu fiiqo waxa ka mid ah Gobolka Sanaag & Hayland oo ah kuwa inta badan aan la taaban Xubnaha Baarlamaanka oo qaarkood jo
Guud ahaan Doorashaa loo dareerayaa PL waxana socota qaban-qaabada xulida Baarlamaanka cusub ee 2019- Gobolada aadka farta loogu fiiqo waxa ka mid ah Gobolka Sanaag & Hayland oo ah kuwa inta badan aan la taaban Xubnaha Baarlamaanka oo qaarkood joogay Xafiiska Golaha 20-Sano ee ay Puntland Jirtay.
Mohamed Mohamud Abdi beerdhige ( Barre ) waa mid ka mida dhalinta Reer Puntland gaar ahaan Gobolka Sanaag isla markaana ah Nin dhalinyaro ah oo u taagan xilka xildhibaanimo ee Sanadka 2019 Baarlamaanka Cusub ee Dowlada Puntland.
Mohamed (barre ) oo ah aqoonyahan dhalinyara ah oo firfircoon, islamarkaana ka sameyey fursado ganacsi wadamada bariga Africa iyo wadankaba ayaa arintan shaaciyey kadib markuu dhawaan wadankii booqasho ku tagay isla markaana sida uu sheegay loo baahanyahay isbedel iyo in dhalinta jaanis la siiyo si loo helo wax qabad dhaba.
Mohamed oo Arintaas ka hadalaya waxaa wuxuu sheegay in loo baahanyahay in deegaanadda sanaag iyo haylaan iyo waliba guud ahaan puntland ay helaan dhalinyaro firfircoon oo ay kadhab tahay inay degaanadooda iyo Guud ahaan wadankaba wax ka bedelaan.
Mohamed waa nin furfuran oo qunyar socod ah isla markaana ay is fahmi karaan bulshada inteeda badan, oo karti badan aadna loogaa yaqaan wadanka iyo wadamada dariska ah..
Sidoo kale dhawaan waxa isna nala soo xidhiidhay C/saaq Mohamed Xaaji Cali oo ah Qurba Joogta Reer Sanaag ee UK isla markaana loolan Xildhibaanada Gobolka Sanaag ugu jira.
Xulida Baarlamaanka Gobolka Sanaag waxa Seexa ugu danbeeya leh Suldaan Siciid C/salaam oo ah Suldaanka Beelaha Warsangeli waxana inta badan muran xoogan ka curtaa xulashada danbe ee Suldaanka .